Immimiselo & nemiqathango
IChipsmall isebenza kwiwebhusayithi ethi www.chipsmall.net ukubonelela ukufikelela kwi-intanethi kulwazi malunga neemveliso ezikhoyo kwiChipsmall (\_"imveliso\_") kunye nokwenza lula ukuthengwa kweMveliso (\_"iNkonzo\_"). Le Migaqo yokuSebenzisa, kunye neMeko yoCwangco, ibizwa ngokuba sisi \_"Sivumelwano\_". Ngokusebenzisa iChipsmall, uyavuma kule migaqo nemiqathango ichazwe apha (\_"iMigaqo yokuSebenzisa\_"). Ngoku-odola iiMveliso, uyavuma kwiMigaqo yokuSebenzisa, kunye neMiqathango yoMyalelo, ebekwe apha ngezantsi. IChipsmall inelungelo lokuguqula esi siVumelwano nangaliphi na ixesha ngaphandle kokukunika isaziso kwangaphambili. Umsebenzi wakho weSiza kulandela naluphi na utshintsho olunje kwisivumelwano sakho sokulandela kwaye uboshwe sisiVumelwano njengoko silungisiwe. Umhla wokugqibela esi siVumelwano esihlaziyiweyo ucacisiwe apha ngezantsi.
Inkonzo, iSiza, kunye nalo lonke ulwazi kunye / okanye umxholo owubonayo, owuvayo okanye onamava kuwo kwiSiza (\_"isiQulatho\_") sikhuselwe yi-China kunye nelungelo lokushicilela, uphawu kunye neminye imithetho, kwaye yeyaseChipsmall okanye umzali wayo. , amaqabane, abaxhasi, abanikeli okanye umntu wesithathu. I-Chipsmall ikunika ilayisensi yakho yobuqu, engadluliswanga, engabandakanyiyo yokusebenzisa iSiza, iNkonzo kunye noMxholo ukuprinta, ukukhuphela kunye nokugcina iinxalenye zoMxholo owukhethayo, ukuba: (1) Sebenzisa ezi kopi kuphela Umxholo weenjongo zakho zeshishini langaphakathi okanye ukusebenzisa kwakho ubuqu, ukungasebenzisi urhwebo; (2) musa ukukopa okanye ukuthumela umxholo kuyo nayiphi na ikhompyutha yenethiwekhi okanye usasaze, usasaze, okanye usasaze uMxholo kuyo nayiphi na imidiya; (3) musa ukuguqula okanye ukuguqula umxholo nangayiphi na indlela, okanye ucime okanye utshintshe nasiphi na ilungelo lobunikazi okanye uphawu lwentengiso. Akukho lungelo, isihloko okanye umdla kuyo nayiphi na into ekhutshelweyo okanye izinto ezikhutshelweyo ezithunyelwa kuwe ngenxa yelayisensi. I-Chipsmall igcina isihloko kunye namalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kuyo nayiphi na iMixholo oyikhuphelayo kwiSayithi, ngokuxhomekeke kule layisensi inesithintelo kuwe ukuba uyisebenzise ngokwakho iMxholo njengoko kubekiwe apha. Awunakho ukusebenzisa nawaphi na amanqaku okanye iilogo ezibonakala kuyo yonke indawo ngaphandle kokuchaza imvume ebhaliweyo evela kumnini wophawu lwentengiso, ngaphandle kokuba kuvunyelwe ngumthetho ofanelekileyo. Awunakho ukwenza isipili, ukukrwela, okanye ukubiyela iphepha lasekhaya okanye nawaphi na amanye amaphepha ale ndawo nakweyiphi na iwebhusayithi okanye iphepha lewebhu. Awunakho ukuqhagamshela \_"amakhonkco anzulu\_" kwiSiza, okt, yenza amakhonkco kule ndawo idlula iphepha lasekhaya okanye ezinye iinxalenye zeSayithi ngaphandle kwemvume ebhaliweyo.
2. Ukuzikhupha kwiiWarranty
I-Chipsmall ayithethi nto, iwaranti echaziweyo okanye imbonakalo malunga nayo nayiphi na imveliso, okanye ngokubhekisele kwindawo, inkonzo okanye umxholo. I-Chipsmall iyazichaza ngokucacileyo zonke iwaranti zalo naluphi na uhlobo, ichaze, ichaze, isemthethweni okanye kungenjalo, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, iziqinisekiso ezichaziweyo zokurhweba, ukulungela injongo ethile, isihloko kunye nokungabikho kolwaphulo-mthetho ngokubhekisele kwiimveliso, indawo, inkonzo. , kunye nomxholo. I-Chipsmall ayigunyazisi ukuba yeyiphi imisebenzi eyenziwa yile ndawo okanye inkonzo ayizukuphazanyiswa, ngexesha elifanelekileyo, ikhuselekile okanye ingenazimpazamo, okanye ukuba iziphene kwindawo okanye inkonzo ziya kulungiswa. I-Chipsmall ayiqinisekisi ukuchaneka okanye ukugqibelela komxholo, okanye ukuba naziphi na iimpazamo kumxholo ziya kulungiswa. Indawo, inkonzo kunye nomxholo zibonelelwa \_"Njengokuba kunjalo\_" kwaye \_"njengoko zikhona\_" KwiChipsmall, iidilesi ze-IP zabakhenkethi zijongwa rhoqo kwaye zihlalutywe ngenjongo yokujonga, kunye nokuphucula ngokufanelekileyo iwebhusayithi yethu kuphela, kwaye Ngexesha lotyelelo lwewebhu, sinokukucela ukuba ufumane ulwazi loqhakamshelwano (idilesi ye-imeyile, inombolo yomnxeba, inombolo yefeksi kunye needilesi zokuhambisa / zokuhlawula). Olu lwazi luqokelelwa ngokuzithandela-kwaye kuphela ngemvume yakho.
Akukho meko apho iChipsmall iya kuba noxanduva kumthengi okanye kuye nawuphina umntu wesithathu ngayo nayiphi na into engangqalanga, engalindelekanga, ekhethekileyo, enesiphumo, isohlwayo okanye umzekelo ongumonakalo (kubandakanya ngaphandle komda wenzuzo elahlekileyo, ukonga okulahlekileyo, okanye ukulahleka kwamathuba eshishini) evela okanye enxulumene ukuya; (I) Nayiphi na imveliso okanye inkonzo ebonelela okanye enokuthi ibonelelwe yiChipsmall, okanye ukusetyenziswa kokungakwazi ukuyisebenzisa; (II) Ukusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa indawo, inkonzo, okanye umxholo; (III) Nakuphi na ukuthengiselana okwenziwe okanye okuququzelelwa sisiza; (IV) Naliphina ibango elibangelwe ziimpazamo, ukushiya izinto, okanye ezinye izinto ezingachanekanga kwindawo leyo, inkonzo kunye / okanye umxholo; (V) Ukufikelela okungagunyaziswanga okanye ukudluliselwa kothumelo okanye idatha (VI) Iingxelo okanye isimilo salo naliphi na iqela lesithathu kule ndawo okanye inkonzo; (VII) Nawuphi na omnye umcimbi onxulumene neemveliso, indawo, inkonzo okanye umxholo, nokuba iChipsmall icetyisiwe malunga nokwenzeka kolo monakalo.
Uxanduva lweChipsmall kunye noxanduva lweziphene zemveliso ziya kuba, kukhetho lweChipsmall, ukubuyisela imveliso engenasiphene okanye ukubuyisela kumthengi imali ehlawulwe ngumthengi ke ngenxa yoko akukho xanduva lweChipsmall oluya kudlula ixabiso lokuthenga lomthengi. Unyango olukhankanywe ngasentla luya kuxhomekeka kumthengi ngesaziso esibhaliweyo sesiphene kunye nokubuya kwemveliso enesiphene zingaphelanga iintsuku ezingamashumi amathandathu (30) zokuthengwa. Eliyeza lingentla alisebenzi kwiimveliso ebezisetyenziswe gwenxa (kubandakanya ngaphandle komda wokukhutshelwa okungagungqiyo), ukungahoywa, ingozi okanye uhlengahlengiso, okanye iimveliso ezithengisiweyo okanye ezitshintshiweyo ngexesha lendibano, okanye kungenjalo azikwazi kuvavanywa. Ukuba awanelisekanga yile ndawo, inkonzo, umxholo, okanye imigaqo yosetyenziso, olona nyango lwakho kukuphela kokuyeka ukusebenzisa le ndawo. Uyavuma, ngokusebenzisa kwakho indawo leyo, ukuba ukusebenzisa kwakho le ndawo kumngcipheko wakho kuphela.
Zonke ii-odolo ezibekwe ngeSiza okanye ngekhathalogu eprintiweyo zixhomekeke kwimiqathango yesi siVumelwano, kubandakanya le miqathango ilandelayo yoMyalelo. Akukho lutshintsho, tshintsho, kucinywayo okanye kulungiswe nasiphi na isiVumelwano esivunyelweyo ngaphandle kwemvume ebhaliweyo ngummeli ogunyazisiweyo weChipsmall. Naluphi na utshintsho ekuthiwa luthunyelwe ngumthengi kulo naluphi na uxwebhu olongezelelweyo luyaliwa ngokucacileyo. Ii-odolo ezifakwe kwiifom eziphambukayo kule migaqo nemiqathango zinokwamkelwa, kodwa kuphela ngenxa yokuba imiqathango yesi siVumelwano iya kuhlala ikhona.
1. UkuQinisekiswa koMyalelo kunye nokwamkelwa.
Xa ufaka iodolo, sinokuqinisekisa indlela yakho yokuhlawula, idilesi yokuthumela kunye / okanye inombolo yesazisi ekhululwe kwirhafu, ukuba ikhona, ngaphambi kokuqhubekisa iodolo yakho. Ukubekwa kwakho komyalelo ngeSiza sisibonelelo sokuthenga iimveliso zethu. I-Chipsmall inokuyamkela i-odolo yakho ngokuqhubekeka nentlawulo kunye nokuthumela iMveliso, okanye, nangasiphi na isizathu, iyala ukwamkela iodolo yakho okanye nayiphi na inxenye yeodolo yakho. Akukho myalelo uya kuqwalaselwa njengokwamkelwa yiChipsmall ide ihanjiswe iMveliso. Ukuba siyala ukwamkela iodolo yakho, siya kuzama ukukwazisa usebenzisa idilesi yemeyile okanye ezinye iinkcukacha zonxibelelwano osinike neodolo yakho.
2. Unxibelelwano ngekhompyutha.
Xa ufaka iodolo ngeSiza, uyacelwa ukuba ubonelele ngedilesi efanelekileyo ye-imeyile, esinokuthi siyisebenzise ukunxibelelana nawe malunga nenqanaba leodolo yakho, sikucebise malunga nokuthunyelwa kweemveliso ezibuyiselweyo, kunye nokubonelela ngazo naziphi na ezinye izaziso , ukubhengezwa okanye olunye unxibelelwano olunxulumene neodolo yakho.
Ikowuti yewebhusayithi yeChipsmall kunye neenkonzo ezinxulumene noko zibalwa kuphela kwiidola zaseMelika kunye nokuhlawulwa kwemali, ukuba imali yaseMelika ayikho ngaphakathi kokusetyenziswa kwabathengi bakazwelonke okanye bengingqi, nceda utshintshe inqanaba lokuhambelana ngokuhambelana ngokwamazwe abo okanye kwimimandla. Onke amaxabiso akwiidola zaseMelika.
4. Ulwazi lweMveliso.
Uhlobo lwewebhusayithi yeChipsmall, inkcazo yemveliso kunye neeparameter, imifanekiso efanelekileyo, ividiyo kunye nolunye ulwazi olunikezelwa yi-Intanethi kunye nabathengisi abafanelekileyo, iwebhusayithi yeChipsmall ayinalo uxanduva lokuchaneka kolwazi, ukuthembeka, ukuba semthethweni okanye ukuthembeka. Ukongeza, iwebhusayithi yeChipsmall okanye naluphi na usetyenziso lokubonelela ngamashishini olwazi kunye nemingcipheko yawo kule webhusayithi ayithwali xanduva.
I-Chipsmall ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlawula ngeedola zaseMelika, kubandakanya iPAYPAL, iKhadi letyala, iKhadi leMasters, iVISA, iAmerican Express, iWestern Union, iTransfer Transfer. Ukuhlawulwa kufuneka kwenziwe ngohlobo lwemali ebekwe ngalo i-odolo. Ukuba uneminye imigaqo yentlawulo, nceda unxibelelane nenkonzo yabathengi yeChipsmall kule [email protected]
6. Iirhafu zokuhambisa ngenqanawe.
Ukuthumela ngenqanawe okanye ukuthuthwa kwempahla, i-inshurensi kunye neerhafu zokuhlawulwa kwamasiko aya kuhlawulwa ngabathengi
7. Imali yebhanki.
Ukutshintshela ngocingo sibiza ama-US $ 35.00 imali yebhanki, kwi-PAYPAL kunye neKhadi letyala sihlawulisa i-5% yemirhumo yenkonzo yexabiso elipheleleyo, kwimanyano yasentshona akukho mrhumo webhanki.
8. Ukuphathwa kweNtlawulo.
Akukho mali incinci yoku-odola okanye yokuphatha.
9. Umonakalo Wempahla kunye noMgaqo-nkqubo wokuBuyisa.
Ukuba ufumana izinto ezithengisiweyo ezonakalisiweyo kuhambo, kubalulekile ukugcina ibhokisi yokuhambisa, izinto zokupakisha kunye nezahlulo ezifanelekileyo. Nceda unxibelelane nenkonzo yabathengi yeChipsmall ngokukhawuleza ukuqalisa ibango. Zonke iifom kufuneka zenziwe zingaphelanga iintsuku ezingama-30 zomhla we-invoyisi kwaye zikhatshwe yinombolo yokuqala ye-invoyisi, isatifikethi sekhadi lesiqinisekiso, umfanekiso wenxalenye kunye nengcaciso emfutshane okanye ingxelo yovavanyo yesizathu sokubuya. Iimbuyekezo aziyi kwamkelwa emva kweentsuku ezingama-30. Intengiso ebuyisiweyo kufuneka ibekwiipakethe zokuqala kwaye zikwimeko enokuphinda ibenakho ukuphinda ibekho. Amalungu abuyisiwe ngenxa yempazamo yomthengi ngexesha lokucaphula okanye lokuthengisa awuyi kwamkelwa.
10. Ingxaki yesiko.
Izicatshulwa ze-Chipsmall zixabiso le-FOB, asinaxanduva lokucoca amazwe amasiko Ukuba iindawo zabathengi zaye zagcinwa okanye zabanjwa ngamasiko wabathengi, iChipsmall inokubonelela ngamaxwebhu kubathengi, kodwa iChipsmall ayinaxanduva lokususwa kwamasiko, iChipsmall ayihlawuli amasiko Umrhumo, konke luxanduva loMthengi ukucoca iinxalenye ezivela kumasiko wabathengi asekhaya. IChipsmall ayizukuphinda ithumele kwakhona ukuba iinxalenye zibanjiwe okanye zabanjwa ngamasiko wabathengi, akukho mbuyiselo yentlawulo.
11. Imisebenzi noxanduva.
I-Chipsmall yindawo yokurhweba ye-B2B kunye ne-B2C, kwaye sinokuhlola imeko yangaphandle yeempahla, kodwa hayi umsebenzi wangaphakathi. Iimbuyekezo zingaphelanga iintsuku ezingama-30 ziya kwamkelwa, nangona kunjalo, abathengi abanamalungelo okutshutshisa iChipsmall ngezinto ezingasebenziyo, kwaye abanalungelo lakucela mbuyekezo. I-Chipsmall liqonga leenkonzo, asingabo abavelisi, sinikezela ngenkonzo kwaye sinceda abathengi ukuba bathenge iimveliso abazifunayo. I-Chipsmall igcina amalungelo enkcazo yokugqibela.